गीतकार तथा रङ्ग पत्रकार लोकराज अधिकारीको सलहका बगाल बारीको पाटामा - साक्षी खबर गीतकार तथा रङ्ग पत्रकार लोकराज अधिकारीको सलहका बगाल बारीको पाटामा - साक्षी खबर
साउन १६, २०७७ | १७६८ पटक पढिएको
१६, साउन, बिजौरी / गीतकार तथा रंग पत्रकार लोकराज अधिकारीको नयाँ नेपाली तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘सलहका बगाल बारीको पाटामा’ बोलको गीतमा सुजाता केसी. र रोशी श्रेष्ठको स्वर रहेको छ । अधिकारीको तीज गीतको आकर्षक भिडियो गीतमा मोडल दिपाशा बि.सी. र सुशिला थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
सुर संगित सोलुशन प्रा.लि.द्वारा सार्वजनिक गरिएको तीज गीत भिडियोको निर्देशक काजिश श्रेष्ठले गरेका हुन् । गीतकार अधिकारीले दर्जनौ गीतहरु रचना गरेर संगित क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याएका छन् । शत्रुगते नामक फिल्मको गीत पनि रचना गरेका रंग पत्रकार तथा गीतकार अधिकारी पछिल्लो समयमा दर्शक र स्रोताहरुको मन जित्न सफल भएका छन् । अधिकारीले भर्खरै सार्वजनिक भएको तीज गीत ‘सलहका बगाल बारीको पाटामा’ हेरेर, सुनेर मनोरञ्जन लिन आग्रह गरेका छन् ।
अझै पनि उक्त सलह किराले देशका विभिन्न जिल्लामा अन्नबाली नष्ट गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानका किसान सलह कीरा भगाउँन बाजागाजा जस्तै थाल, जर्कीन ठटाउँनदेखि गीतसमेत गाइरहेका छन् ।